စိတျမခိုငျလို့ မကွညျ့ဖွဈရငျတောငျ ရှဲပေးသငျ့တဲ့ ရငျနငျ့စရာ မိဘမဲ့. – Messi Club
စိတျမခိုငျလို့ မကွညျ့ဖွဈရငျတောငျ ရှဲပေးသငျ့တဲ့ ရငျနငျ့စရာ မိဘမဲ့.
လူ့ပွညျ​က အပျ​တဈ​စငျး ဗွမ်မာပွညျ​ကအပျ​တဈ​စငျး ဆုံ​​တှဖေို့ လှယျ​ရငျ​ လှယျ​မယျ​လူဖွဈ​ဖို့ ခဲရငျးတယျ​ တဲ့ဒီတရား​တှကေ ကြှနျ​​တော့နှလုံးသားထဲ စှဲ​နခေဲ့ပွီ ​လမေိဘလို့သာ​ တျော​စပျ​ခဲ့ပွီးချေါခှငျ့​မထိုကျ​ခဲ့တဲ့ ကြှနျ​​တျော​လို ​ကောငျ​ကအတိတျ​ ဝဋျ​​ကွှေးကိုပဲ အပွဈ​ဖို့ရမလား
အသကျ​တဈ​​ခြောငျးအတှကျ​လူဖွဈ​ခှငျ့​​ပေးခဲ့တဲ့ အ​​မေ အ​ဖေ ဆိုတဲ့ပုဂ်ဂိုလျ​ကွီး​တှကေိုပဲ ​ကြေးဇူးတငျ​ရမလား…သူငယျ​ခငျြး တဈ​ခြို့ရဲ့ အ​ဖေ အ​မေ​ချေါသံကွားတိုငျးကြှနျ​​တျော​ သူတို့ကို မုနျးမိတယျ​ဒါ…. ကြှနျ​​တျော​ မှားလား
ငယျ​ငယျ​က မူလတနျးဖတျ​စာမှာ ဖတျ​ခဲ့ရတဲ့စားဝတျ​​နေ​ရေး ​ငှရှော​ပေး ​ကြေးဇူးကွီး​ပေ တို့​ဖေ​ဖေ ….​ငယျ​စဉျ​ကာလ စညျးကမျးပွဆုံးမ ခဲ့​ပေ တို့ ​မေ​မေ ဆိုတဲ့ကဗြာအဓိပ်ပယျ​ကို ဖှငျ့​ဆိုဖို့ ကြှနျ​​တော့ဦး​နှောကျ​က ညဏျ​မမှီခဲ့ဘူးထငျ​တယျ​နားမလညျ​လို့ ဦးလေးနှငျ့အဒျေါကို ​မေးဖွဈ​ခဲ့တိုငျးမိဘဆိုတာ ဘုရားနဲ့ တဈ​ဂိုဏျးထဲ ငါ့တူ ရဲ့…တဲ့
ဒီစကား​တှကေို နား​ယောငျ​ပွီးဘာမှနျးမသျိတတျ​ခဲ့​ပမေယျ့​အနန်တဂိုဏျးထဲထညျ့ပွီး ​​ညတိုငျးဦးခြ ဖွဈ​ခဲ့တယျ​ဒါမယျ့​ ကြှနျ​​တျော​ခုထိ ဘာသာမပွနျ​တတျ​ခဲ့ဘူး ​လေ အ​ဖတေဲ့…..​ချေါခှငျ့​မရ​တော့ဘူး.အပွဈ​မယူခငျြ​​ပမေယျ့​ အပွဈ​ယူမိပွီ အ​ဖေ…ရယျ​ပတျ​ဝနျးကငျြ​ရဲ့ စကားသံတဈ​ခြို့ကြှနျ​​​တျော​ ဘာသာပွနျ​တတျ​​နပွေီ​လေ
အ​မတေဲ့.လေးစား​လောကျ​တဲ့မိခငျ​အဖွဈ​ကြှနျ​​တော့ စိတျ​ကူးထဲ ခဏခဏ​တှေးယူကွညျ့​ဖူးတယျ​​တှေးမိတိုငျးမကျြ​ရညျ​ကတြယျ​စကားလုံးကွားတိုငျး အသကျ​ရှူရပျ​မတတျ​ခံစားရတယျ​ကြှနျ​​တော့အတှကျ​က​တော့ ဂန်တဝငျ​ ​မေ​မဆေိုတာသီခငျြး ထဲက စာသား​တှပေါ
အ​မရော. .နောကျ​တဈ​​ယောကျ​ရှာသှားတာပဲလား လသားအရှယျ​ ကလေးကို ဒီ တိုငျးထားလမျး​ဘေး စှနျ့​မပဈ​ခဲ့တာပဲ ​ထိုငျ​ရှိခိုး​နမေိတယျ​အ​မေ…​ရကြှေ​နျ​​တျော​ ​မှေးတုနျးကမိဘမဲ့ ​ဂဟောမြား​မ​ပျေါခဲ့ ​သေး​လသေလား..
အ​မလေို့ မိခငျ​မြိုး​တှရှေိ​နသေ၍မိဘမဲ့ ​ဂဟော​တှေ ဆကျ​လကျ​ပွနျ့​ပှား​နအေုံးမယျ​ အ​မခေုခြိနျ​ထိ အ​မဆေိုတာဖွူသလား မဲသလားမသိခဲ့ရအ​မသေ့တငျးသဲ့သဲ့ ကွားတယျ​အ​မလေညျး သူ့အိုးအိမျ​အသဈ​နဲ့ အဆငျ​​ပွတေယျ​ တဲ့ကြှနျ​​တော့ကို မ​မွငျ​ မ​တှေ့ ခငျြ​ဘူးထငျပါရဲ့ခုထိ ကြ​တော့ ​ရှေ့​ရောကျ​မလာခဲ့​သေးပါဘူး
အ​မေ​ရေ….​နနေိုငျ​သူကွီးလို့​တောငျ​​ခေါငျးစဉျ​ တပျ​ ​ချေါလိုကျ​ခငျြ​တယျ​…​လအေ​ဖဆေိုတဲ့ပုဂ်ဂိုလျ​ကွီးက​တော့အကွိမျ​​ကို ​ရတှေကျ​လို့ရ​ပမေယျ့​နှဈ​ကို ​ရတှေကျ​လို့မရ​အောငျ​ ​ကြှနျ​​တော့​​ရှေ့ ​ရောကျ​လာဖူးတယျ​သံ​ယောဇဉျ​ အသဈ​နဲ့မိသားစု အသဈ​ ရှငျ​သနျ​​နတေဲ့ဘဝမှာ ​ပြျော​​နတေယျ​ ထငျ​ပါရဲ့
ကနြျောကတော့နသေားကြ ​နပေါပီ အ​ဖေ​ရေ.အ​ဖသော ​ပြျော​​အောငျ​ ​နပေါစိတျ​နာ​ပမေယျ့​ လမျးသှားတိုငျး အမြိုးသမီး ကွီး​တှေ ​မွငျ​တိုငျး​စောငျးကွညျ့​ရတဲ့ အလုပျ​ကကြှနျ​​တော့အတှကျ​ပိုသှားတယျ​မိဘမဲ့ ​ဂဟောကို သှားလှူဖွဈ​တိုငျးမကျြ​ရညျ​ကမြိတယျ​တခြို့က မိဘ သကျ​ရှိထငျ​ရှားမရှိ​တော့လို့​ဂဟောမှာ ရှငျ​သနျ​ကွတယျ​တခြို့က မိဘစှနျ့​ပဈ​လို့ဂဟော မှာ ရှငျ​သနျ​ ရတယျ​
သူတို့​တှကွေညျ့​ပွီး ကြှနျ​​တျော​ ရငျ​နာမိတယျ​မိဘမရှိလို့ မိဘမဲ့ရတဲ့ ဘဝထကျ​မိဘရှိရကျ​နဲ့ မိဘ မဲ့ရတဲ့ဘဝကို ပိုရငျ​နာတယျ​ဆု​တောငျးတိုငျးမပွညျ့​ဘူးဆိုတာ သိ​ပမေယျ့​ဘဝဆကျ​တိုငျး အမိတကှဲ အဖတကှဲ မဖွဈ​ဖို့ဘုရား​ရောကျ​တိုငျး ဆု​တောငျးဖွဈ​တယျ​
#Crd. . .မိကံကောငျး
လူ့ပြည်​က အပ်​တစ်​စင်း ဗြမ္မာပြည်​ကအပ်​တစ်​စင်း ဆုံ​​တွေ့ဖို့ လွယ်​ရင်​ လွယ်​မယ်​လူဖြစ်​ဖို့ ခဲရင်းတယ်​ တဲ့ဒီတရား​တွေက ကျွန်​​တော့နှလုံးသားထဲ စွဲ​နေခဲ့ပြီ ​လေမိဘလို့သာ​ တော်​စပ်​ခဲ့ပြီးခေါ်ခွင့်​မထိုက်​ခဲ့တဲ့ ကျွန်​​တော်​လို ​ကောင်​ကအတိတ်​ ဝဋ်​​ကြွေးကိုပဲ အပြစ်​ဖို့ရမလား
အသက်​တစ်​​ချောင်းအတွက်​လူဖြစ်​ခွင့်​​ပေးခဲ့တဲ့ အ​​မေ အ​ဖေ ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်​ကြီး​တွေကိုပဲ ​ကျေးဇူးတင်​ရမလား…သူငယ်​ချင်း တစ်​ချို့ရဲ့ အ​ဖေ အ​မေ​ခေါ်သံကြားတိုင်းကျွန်​​တော်​ သူတို့ကို မုန်းမိတယ်​ဒါ…. ကျွန်​​တော်​ မှားလား
ငယ်​ငယ်​က မူလတန်းဖတ်​စာမှာ ဖတ်​ခဲ့ရတဲ့စားဝတ်​​နေ​ရေး ​ငွေရှာ​ပေး ​ကျေးဇူးကြီး​ပေ တို့​ဖေ​ဖေ ….​ငယ်​စဉ်​ကာလ စည်းကမ်းပြဆုံးမ ခဲ့​ပေ တို့ ​မေ​မေ ဆိုတဲ့ကဗျာအဓိပ္ပယ်​ကို ဖွင့်​ဆိုဖို့ ကျွန်​​တော့ဦး​နှောက်​က ညဏ်​မမှီခဲ့ဘူးထင်​တယ်​နားမလည်​လို့ ဦးလေးနှင့်အဒေါ်ကို ​မေးဖြစ်​ခဲ့တိုင်းမိဘဆိုတာ ဘုရားနဲ့ တစ်​ဂိုဏ်းထဲ ငါ့တူ ရဲ့…တဲ့
ဒီစကား​တွေကို နား​ယောင်​ပြီးဘာမှန်းမသ်ိတတ်​ခဲ့​ပေမယ့်​အနန္တဂိုဏ်းထဲထည့်ပြီး ​​ညတိုင်းဦးချ ဖြစ်​ခဲ့တယ်​ဒါမယ့်​ ကျွန်​​တော်​ခုထိ ဘာသာမပြန်​တတ်​ခဲ့ဘူး ​လေ အ​ဖေတဲ့…..​ခေါ်ခွင့်​မရ​တော့ဘူး.အပြစ်​မယူချင်​​ပေမယ့်​ အပြစ်​ယူမိပြီ အ​ဖေ…ရယ်​ပတ်​ဝန်းကျင်​ရဲ့ စကားသံတစ်​ချို့ကျွန်​​​တော်​ ဘာသာပြန်​တတ်​​နေပြီ​လေ
အ​မေတဲ့.လေးစား​လောက်​တဲ့မိခင်​အဖြစ်​ကျွန်​​တော့ စိတ်​ကူးထဲ ခဏခဏ​တွေးယူကြည့်​ဖူးတယ်​​တွေးမိတိုင်းမျက်​ရည်​ကျတယ်​စကားလုံးကြားတိုင်း အသက်​ရှူရပ်​မတတ်​ခံစားရတယ်​ကျွန်​​တော့အတွက်​က​တော့ ဂန္တဝင်​ ​မေ​မေဆိုတာသီချင်း ထဲက စာသား​တွေပါ
အ​မေရာ. .နောက်​တစ်​​ယောက်​ရှာသွားတာပဲလား လသားအရွယ်​ ကလေးကို ဒီ တိုင်းထားလမ်း​ဘေး စွန့်​မပစ်​ခဲ့တာပဲ ​ထိုင်​ရှိခိုး​နေမိတယ်​အ​မေ…​ရေကျွ​န်​​တော်​ ​မွေးတုန်းကမိဘမဲ့ ​ဂေဟာများ​မ​ပေါ်ခဲ့ ​သေး​လေသလား..
အ​မေ့လို မိခင်​မျိုး​တွေရှိ​နေသ၍မိဘမဲ့ ​ဂေဟာ​တွေ ဆက်​လက်​ပြန့်​ပွား​နေအုံးမယ်​ အ​မေခုချိန်​ထိ အ​မေဆိုတာဖြူသလား မဲသလားမသိခဲ့ရအ​မေ့သတင်းသဲ့သဲ့ ကြားတယ်​အ​မေလည်း သူ့အိုးအိမ်​အသစ်​နဲ့ အဆင်​​ပြေတယ်​ တဲ့ကျွန်​​တော့ကို မ​မြင်​ မ​တွေ့ ချင်​ဘူးထင်ပါရဲ့ခုထိ ကျ​တော့ ​ရှေ့​ရောက်​မလာခဲ့​သေးပါဘူး
အ​မေ​ရေ….​နေနိုင်​သူကြီးလို့​တောင်​​ခေါင်းစဉ်​ တပ်​ ​ခေါ်လိုက်​ချင်​တယ်​…​လေအ​ဖေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်​ကြီးက​တော့အကြိမ်​​ကို ​ရေတွက်​လို့ရ​ပေမယ့်​နှစ်​ကို ​ရေတွက်​လို့မရ​အောင်​ ​ကျွန်​​တော့​​ရှေ့ ​ရောက်​လာဖူးတယ်​သံ​ယောဇဉ်​ အသစ်​နဲ့မိသားစု အသစ်​ ရှင်​သန်​​နေတဲ့ဘဝမှာ ​ပျော်​​နေတယ်​ ထင်​ပါရဲ့
ကျနော်ကတော့နေသားကျ ​နေပါပီ အ​ဖေ​ရေ.အ​ဖေသာ ​ပျော်​​အောင်​ ​နေပါစိတ်​နာ​ပေမယ့်​ လမ်းသွားတိုင်း အမျိုးသမီး ကြီး​တွေ ​မြင်​တိုင်း​စောင်းကြည့်​ရတဲ့ အလုပ်​ကကျွန်​​တော့အတွက်​ပိုသွားတယ်​မိဘမဲ့ ​ဂေဟာကို သွားလှူဖြစ်​တိုင်းမျက်​ရည်​ကျမိတယ်​တချို့က မိဘ သက်​ရှိထင်​ရှားမရှိ​တော့လို့​ဂေဟာမှာ ရှင်​သန်​ကြတယ်​တချို့က မိဘစွန့်​ပစ်​လို့ဂေဟာ မှာ ရှင်​သန်​ ရတယ်​
သူတို့​တွေကြည့်​ပြီး ကျွန်​​တော်​ ရင်​နာမိတယ်​မိဘမရှိလို့ မိဘမဲ့ရတဲ့ ဘဝထက်​မိဘရှိရက်​နဲ့ မိဘ မဲ့ရတဲ့ဘဝကို ပိုရင်​နာတယ်​ဆု​တောင်းတိုင်းမပြည့်​ဘူးဆိုတာ သိ​ပေမယ့်​ဘဝဆက်​တိုင်း အမိတကွဲ အဖတကွဲ မဖြစ်​ဖို့ဘုရား​ရောက်​တိုင်း ဆု​တောင်းဖြစ်​တယ်​
#Crd. . .မိကံကောင်း